Filtrer les éléments par date : vendredi, 05 février 2021
vendredi, 05 février 2021 20:11
Pilo kely nindramina : Resaka mayonnaise foana ity, ahodina fa ny eo ihany no eo
Bonne nuit nareo e, merci tompon'ny mayonnaise.
vendredi, 05 février 2021 20:03
Haino amanjery : Notapahana ny Télé MBS amin'ny Canal
Notapahana ny fahazoan'ny canal sat, startimes, parabole ny fandaharana MBS.
Tsy afaka mahita izany televizionina izany ny any amin'ny faritany rehetra ankoatran'ny faritra vitsivitsy eto Antananarivo amin'ny alalan'ny UHF.
Praiministra : Nalefa notsaboina maika atsy La Reunion
Nanainga io maraina io ny Praiminisitra entina ho tsaboina maika atsy amin'ny nosy La Reunion.
Tratra ny tsy fahasalamana tampoka izy ny alarobia maraina, raha niezaka niatrika ny filankevitry ny minisitra kosa ny hariva.
vendredi, 05 février 2021 10:20
Trafic 73.5kg d'or : Conférence de presse de la Gendarmerie nationale cet après-midi
La Gendarmerie nationale organisera une conférence de presse cet après-midi du vendredi 05 février 2021, à 14h00, à la salle d'honneur du Commandement de la Gendarmerie, Toby Richard Ratsimandrava Andrefan'Ambohijanahary concernant l'affaire trafic 73.5kg d'or.
vendredi, 05 février 2021 09:58
Raharaha volamena 73.5kg : Hiantso mpanao gazety anio ny Zandarimaria
Anio tolak'andro zoma 05 febroary 2021, amin'ny 2ora, dia hitafa amin'ny mpao gazety ny eo anivon'ny Zandarimariam-pirenena ao amin'ny salle d'honneur du Commandement de la Gendarmerie, Toby Richard Ratsimandrava Andrefan'Ambohijanahary mahakasika ilay trafika volamena 73.5kg.
vendredi, 05 février 2021 09:56
Volamena 73.5kg : Mijokojoko ny mpitatitra any ambadika
Caméra N° 8 mitatitra entana maivamaivana circuit normal, entana avy nosavaina, caméra N° 6 misy manosika chariot mavesatra hors circuit de fouille 31 desambra 2020, 04:49 heure locale, eny amin'ny fiaramanidina 5R-ASB.